ဌာနခြုပျကို ပဈသော အမွောကျဆံမြား အဘယျကလာသနညျး ? – Kyaw Zaw Oo's Blog
May 18, 2016 March 9, 2019 kyaw zaw oo
ဌာနခြုပျကို ပဈသော အမွောကျဆံမြား အဘယျကလာသနညျး ?
ဌာနချုပ်ကို ပစ်သော အမြောက်ဆံများ အဘယ်ကလာသနည်း ?
(၂၀၁၆ မေလ ၁၈ ရက်)
(ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး အနှစ်ငါးဆယ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စာစု)
မော်စီတုန်း ဦးဆောင်သည့် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး ဟု ခေါ်တွင်သော ဧရာမ နိုင်ငံရေး ဖြုတ်ထုတ်သတ် ဖြစ်စဉ်ကြီး မှာ ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၆-ခုနှစ် မေလ (၁၆) ရက်နေ့က အနှစ်ငါးဆယ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီး လေပြီ။ မဟာ ပစ္စည်းမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး (Great Proletarian Cultural Revolution) ဟု တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တရားဝင်ခေါ်ဝေါ်သော ဗရုတ်သုတ်ခကာလကြီးပင် ဖြစ်လေသည်။
ဖြစ်စဉ်၏ စလုံးရေစ ၁၉၆၆-ခုနှစ် မေလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် အောက်ပါစာသားများပါဝင်သော အသိပေးထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကို စတင်ခဲ့သည်။
“ပါတီထဲ၊ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ၊ တပ်မတော်ထဲ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်အသီးသီးသို့ တိတ်တဆိတ် စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက်လာခဲ့ကြသော ထို ဘူဇွာလူတန်းစား ကိုယ်စားလှယ်များမှာ တန်ပြန် တော်လှန်ရေးသမား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသမား တစ်သိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းတို့အတွက် အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့ ရင့်မှည့် အဆင်သင့်ဖြစ်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ထိုသူတို့သည် နိုင်ငံရေးအာဏာကို ရယူသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကို ဘူဇွာတို့၏အာဏာရှင်စနစ် အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသူများထဲမှ အချို့ကို သိသာမြင်သာနိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း အချို့ကိုကား မသိသာမမြင်သာနိုင်သေးပေ။ ယင်းထဲမှ အချို့မှာ ကျွန်ုပ်တို့ အခုထက်တိုင် ယုံကြည်မိနေကြသေးသူများ ဖြစ်ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်ခံဖို့အတွက်တောင် လေ့ကျင့်သင်ကြား နေရာပေးထားသူတွေ ဖြစ်နေကြသည်။ ပမာဆိုရလျှင် ခရူးရှက် ၏ သဘောသဘာဝရှိသောသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသူများသည် (ဆိုလိုသည်မှာ ထိုရန်သူများသည်) ကျွန်ုပ်တို့၏ နံဘေးတွင်ပင် သက်တောင့်သက်သာ လဲလျောင်းနေကြ တုန်းပင်ဖြစ်လေသည်။ အဆင့်ဆင့်သော ပါတီကော်မီတီ အားလုံးတို့သည် ဤအရေးကိစ္စအား မပြတ် သတိထား စောင့်ကြည့်ကြရမည် ဖြစ်သည်။”
ဆိုလိုရင်းသတင်းစကား ကား ရှင်းပစ်ရမယ့် လူတွေ ငါတို့ထဲမှာ ရှိနေတယ် ဟူ၏။
ထို့နောက် မေလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် ပီကင်းရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ ပါမောက္ခတစ်ဦး နှင့် ၄င်း၏ အပေါင်းအသင်းများ သည် ယင်းတက္ကသိုလ်ပါတီခေါင်းဆောင်များကို ဝေဖန်ထားသော စကားလုံးတိုက်ပွဲ ပိုစတာ တစ်ခုအား ကျောင်းဝင်းရှိ အဆောက်အအုံတစ်ခု နံရံတွင် ကပ်သည်။ ရက်များမကြာမီ ပီကင်းရှိ အခြားသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်စုကလည်း မိမိတို့ကိုယ်မိမိတို့ တပ်နီလူငယ်များ ဟု အမည်တပ်ကာ အလားတူ စကားလုံးတိုက်ပွဲ ပိုစတာများ ကပ်ကြသည်။
နောက်လပိုင်းအကြာ သြဂုတ်လ (၆) ရက်နေ့တွင် မော်စီတုန်းသည် အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုများကို အားပေးသော မိန့်ခွန်းတစ်ခုအား ပြောကြားသည်။ တဖန် နောက်ရက်များမကြာမီပင် မော်စီတုန်း ပထမဆုံး စီကုံးရေးသားသည် ဆိုသော တိုက်ပွဲပိုစတာ ထွက်ရှိလာလေသည်။ ယခုဆောင်းပါး၏ ပူးတွဲပါ ဓါတ်ပုံဖိုင် တစ်ခုတွင် စာရေးစုတ်တံကိုင်ထားသော မော်စီတုန်းပုံပါရှိသည်။ ယင်းပိုစတာပင် ဖြစ်လေသည်။ အဆိုပါ ပိုစတာ၏ ညာဘက် အပေါ်ပိုင်း တွင် စာသုံးကြောင်းပါရှိသည်။ ပထမစာကြောင်းက ဆိုသည်မှာ “ဌာနချုပ်ကို အမြောက်နှင့် ပစ်ကြ” ဟူ၏။ ဒုတိယစာကြောင်းက “ကျွန်ုပ်၏ ပထမဆုံး စာလုံးကြီး ပိုစတာ” ၊ တတိယစာကြောင်းက “မော်စီတုန်း” အသီးသီးဖြစ်ကြသည်။ မော်၏ နာမည်ကြီး ဖြုတ်ထုတ်သတ် တိုက်ပွဲခေါ်သံ ပိုစတာဖြစ်လေသည်။ “ဌာနချုပ်ကို အမြောက်နှင့် ပစ်ကြ” (Bombard the heardquarters) ။ ၇၂-နှစ် အရွယ် မော် ၏ တိုက်ပွဲ အော်သံ ဖြစ်လေသည်။
ထို့နောက် သြဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့တွင် လာမည့် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးအတွင်း ကျင့်သုံးရမည့် မော်စီတုန်း၏ လမ်းညွှန်ချက် (၁၆) ချက် ထွက်ရှိ ထုတ်ပြန်သည်။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရေးသားထားသည်ပင်မှန်သော်လည်း စကားလုံးများ၏ အထဲတွင် အကြမ်းဖက်မှု မျိုးစေ့များ ပါဝင်နေသည်။ ဥပမာ – အချက် နံပါတ် (လေး)။
အချက်နံပါတ် (လေး) ။ ။ လူထုကို ယုံကြည်ပါ အားကိုးပါ၊ လူထု၏ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှုကို လေးစားပါ။ ကြောက်ရွံ့မှုကို လွှင့်ပစ်ပါ။ ဥက္ကဌကြီးမော်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောသည်မှာ – တော်လှန်ရေးမည်သည် အလွန် သိမ်မွေ့နေ၍မရ၊ နူးညံ့နေ၍မရ၊ ကြင်နာသနား ယဉ်ကျေးကာ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း လူသူတော်ကောင်း ပုံစံ လုပ်နေ၍ မရ။
တပ်နီအစောင့်တပ်ဖွဲ့လှုပ်ရှားမှု အား လုပ်ဆောင်ကြရတော့မည် ဟု သြဂုတ်လ (၁၈) ရက်နေ့ ထိယင်နင်မင် ရင်ပြင်၌ ပြုလုပ်သော ဧရာမ လူထုစုရုံးဟောပြောပွဲတွင် မော်စီတုန်းက တိုက်တွန်းဟောပြောသည်။ ထိုနေ့က ဟောပြောနေစဉ် မော်၏ လက်မောင်းတွင် စည်းနှောင်ထားသော လက်ပတ်နီမှာ ဤကျောင်းသားလူငယ်များ လှုပ်ရှားမှု၏ အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ “အဟောင်းလေးမျိုးကို ဖြိုဖျက်ပြီး အသစ်လေးမျိုးကို ပျိုးထောင်ကြ” ဖို့ တပ်နီလူငယ်များအား ထိုဟောပြောပွဲတွင် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော သမိုင်းဝင်ဖြစ်စဉ်များတွင်ကား “ဥက္ကဌကြီးမော်၏ အဆိုအမိန့်များ” အမည်ရှိ စာအုပ်နီကလေးများကို လက်တွင်ကိုင်ဆောင်ထားကြသည့် တပ်နီလူငယ်များ တရုတ်နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်း သောင်းကျန်းမင်းမူကြလေသည်။ နောက်နှစ်နှစ်ဆက်တိုက် ကာလ လုံးလုံး ရက်စက်မှု အပေါင်း သရဖူဆောင်းသည်။ အကြမ်းဖက်မှုတို့ လွှမ်းခြုံသည်။ တရုတ်တစ်ပြည်လုံး ၀ရုန်းသုန်းကား ဖြစ်ပျက်နေခဲ့လေသည်။ မည်သူမျှ ထိန်းချုပ်၍ မရ။ ထို မည်သူမျှထိန်းချုပ်၍ မရသော ၀ရုန်းသုန်းကား ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုပင်လျှင် မော်က ဇက်ကြိုးကိုင်ထားခဲ့သည်။ နှင်တံတို့ထားခဲ့သည်။
Red Guards ခေါ် တပ်နီလူငယ်များသည် စာအုပ်များကို မီးတိုက်သည်။ ဘုရားကျောင်းကန်များကို ဖြိုဖျက်သည်။ ကျောင်းဆရာများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆုံးမသည်။ မော်စီတုန်းအား နိုင်ငံရေးအရ အားပြိုင်နိုင်သူများကို ရှင်းလင်းသည်။ လူအများ သေကြေပျက်စီးကြရသည်။ နံပါတ်နှစ်အဆင့် ခေါင်းဆောင် တရုတ်သမ္မတ လျူရှောက်ရှီ မှာ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရသည်။ ရန်သူ၏ သူလျှို ဖြစ်သည် အစရှိသော စွပ်စွဲချက်ပေါင်းများစွာဖြင့် ရာထူးတာဝန်များအားလုံးမှ ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းခံရသည်။ ပါတီမှထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသည်။ လျူလျောက်ရှီမှာ အခါအားလျော်စွာ အများမြင်ကွင်း လူစုလူဝေးရှေ့တွင် စွဲချက်တင် အပြစ်တင်ခြင်း လူပုံအလယ်တွင် ရိုက်ပုတ်ခြင်း ထုထောင်းခြင်း တို့ကို တပ်နီလူငယ်များပြုသမျှခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၆၉-ခုနှစ်တွင် ထို ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် များဖြင့် ကွယ်လွန်သည်။ နံပါတ် သုံး-လေး ခေါင်းဆောင် အဆင့်ရှိခဲ့သူ တိန်ရှောင့်ဖိန် သည် လည်း ရာထူးတာဝန်များအားလုံးမှ ဖယ်ရှားခြင်းခံရသည်။ စက်ရုံတစ်ရုံတွင် အောက်ခြေအဆင့် သာမန်အလုပ်သမား တစ်ဦးအဖြစ် လေးနှစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည်။
ထိုစဉ်က ဖြစ်ရပ် ဓါတ်ပုံများစွာတို့တွင် တပ်နီလူငယ်များမှာ စာအုပ်နီကလေးများကို ကိုင်ဆောင်ထား ကြသည် ကို တွေ့ရသည်။ ရက်စက်သောလုပ်ရပ်များကို လုပ်ရာတွင် ဥက္ကဌကြီးမော်၏ အဆိုအမိန့်များကို ထိုစာအုပ်ငယ်ထဲမှ မကြာခဏ ကိုးကားကြသည်။ “သင်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ လူတန်းစားရန်သူ အကြားမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား ခြားနေပါစေ (Drawaline between yourselves and the class enemy)” တို့၊ “ရန်သူကို သနားတာဟာ ပြည်သူလူထုကို ရက်စက်တာနဲ့ အတူတူပဲ (Mercy to the enemy is cruelty to the people!)” ဆိုသည့် မော်၏ စကားတို့မှာ ၄င်းတို့၏ လက်စွဲများ ဖြစ်ကြလေသည်။ တရုတ်ပြည်အနှံ့တွင် လူကြီးများ၊ ပညာရှင်များ၊ ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ စွပ်စွဲခံရသူ ယောင်္ကျား မိန်းမများစွာတို့သည် မိမိတို့သားအရွယ် မြေးအရွယ် လူငယ်များထံ သွေးသံရဲရဲဖြင့် ဒူးထောက်တောင်းပန်ကြရသည်။ လည်ပင်းတွင် သစ္စာဖောက် ဆိုသည့် စာတမ်းကို ချိတ်ဆွဲပြီး လူမြင်ကွင်းတွင် ထုထောင်းသတ်ပုတ်ခြင်း ခံကြရသည်။ ခေတ်ပညာတတ် မြို့နေလူတန်းစားတို့အား လယ်တောယာတောများတွင် အလုပ်ကြမ်းလုပ်ရန် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပို့သည်။
မော်စီတုန်း၏ မဟာခုန်ပျံကျော်လွှားမှုကြီး (the Great Leap Forward) ဟု အမည်ပေးထားသည့် စီမံကိန်းကြီး ကျရှုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်း ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဖြစ်ပွားကာ တရုတ်ပြည်သူသန်းပေါင်းများစွာ သေကြေခဲ့ရ သည်။ ထိုကျရှုံးမှုမှာ မော်ဝါဒီတို့ ယုံကြည်သော ကွန်မြူနစ်တော်လှန်ရေးကြီး ကိုယ်တိုင်၌က မှားနေလို့ ဖြစ်ရတာမဟုတ်၊ ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကို သစ္စာဖောက်သောသူများ ရှိနေလို့သာ တော်လှန်ရေးကြီး ကျရှုံးနေရခြင်းဖြစ်သည် ဟု ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးအားဖြင့် ပုံဖော်ပစ်လိုက်သည်။ အင်အား ကြီးမားလှစွာသော ပြည်သူလူထု၏ မကျေနပ်မှု ကို ထွက်ပေါက် ပေးလိုက်သည်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဖက်များ (တစ်ကယ်တော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဟောင်းများ) ကို ရှင်းလင်းပစ် လိုက်သည်။
မော် သည် အတုမရှိ ခေါင်းဆောင် ပြန်ဖြစ်သွားသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် တစ်ခါက မော်ဝါဒီတွေ ပေါပေါများများတွေ့ရသော ခေတ်တစ်ခေတ် ရှိခဲ့ဖူးသည်။
ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးမှာ ရာစုနှစ်ဝက် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး၊ မော်စီတုန်း ကွယ်လွန်သည်မှာ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း ရခိုင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် မော်ဝါဒအား လျှို့ဝှက်သိုသိပ်စွာ ရင်ဝယ်ပိုက်ထားကြသူများ ယနေ့ထက်တိုင် ရှိနေဆဲ ဟုတ်မဟုတ် တိတိပပ မပြောနိုင်ပေ။ သို့ရာတွင် သဘောတရားရေးအရ မော်ဝါဒီ လုံးဝမဟုတ်ပါ ဟု ခံငြင်းစေဦးတော့ နိုင်ငံရေးအမူအကျင့် နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ရာမှာ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ပုံ (modus operandi) မှာ မော်ဝါဒီ အရိပ်အငွေ့များ ရှိကောင်း ရှိနေနိုင်သည်။
လူထုယုံကြည်မှု မှန်ကန်စွာရယူနိုင်ရေးထက် ပါတီထိန်းချုပ်နိုင်ရေးကိုသာ အားပြုခြင်း၊ ‘ရန်မုန်းမှ ငါချစ်ရာရောက်သည်၊ ရန်ငါပြတ်ရမည်’ စသည်အားဖြင့် လူငယ်များအားမှိုင်းတိုက်ခြင်း၊ မှိုင်းမိနေသော လူငယ်များကတစ်ဆင့် မိမိ၏ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဖက်များအား ပုတ်ခတ်ခြင်း တိုက်ခိုက်ခြင်း ချေမှုန်းခြင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ပြိုင်ဘက်များကို ‘ရန်သူ’ အဖြစ် ‘ရန်သူ့သူလျှို’ အဖြစ် ‘သစ္စာဖောက်’ အဖြစ် ပုံဖော်ခြင်း တို့မှာ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကာလ မော်စီတုန်း၏ နည်းလမ်းအချို့ ဖြစ်လေသည်။ ဌာနချုပ်ကို ပစ်ပါ ဟု အမိန့်ပေးခံရသော အမြောက်ဆံ တို့သည် အဘယ်က လာသနည်း ? ။ ထိုအမြောက်ဆံတို့သည် မလုံခြုံမှုခံစားရသော မနာလိုစိတ်များစီးယိုနေသော မော်ဝါဒီ ခေါင်းဆောင်များ ၏ ရင်ထဲက လာခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
အမေရိကန် လက်ယာဝါဒီ Tea Party လှုပ်ရှားမှုက သုံးစွဲသော အထိမ်းအမှတ်အလံတွင် ခလောက်မြွေတစ်ကောင်က ပေါက်တော့မည့် ဟန်ပြင်နေသည့် ပုံပါရှိသည်။ ထိုမြွေပုံ၏ အောက်တွင် Don’t tread on me! ဟု စာရေးထားသည်။ ငါ့ကို မနင်းနဲ့၊ နင်းရဲရင် နင်းကြည့် ဆိုသည့်သဘော။ လာနင်းရင်တော့ ပြန်ကိုက်မည်၊ မနင်းရင် မကိုက်ဆိုသည့် သဘော။ မိမိက စလို့ကျူးကာ တိုက်ခိုက်သူ မဟုတ် ဆိုသည့် သဘော ပါနေသည်။ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဖက်များကို လက်ဦးမှုရယူ အပြတ်ရှင်းတတ်သည့် မော် ၏ လုပ်နည်းလုပ်ဟန် နှင့် ကျွန်တော် နှိုင်းယှဉ်တွေးတောမိခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် အခြားတစ်ဘက်က မော်ဝါဒီ အတွေးအခေါ် ကျတော့ ရန်သူကို မုန်းမှ ပြည်သူကို ချစ်ရာရောက်သည် ဟု ဆိုပြီးသည့်နောက်၊ မိမိတစ်ဘက်တည်းသားတွေကိုပင်လျှင် ရန်သူဆိုတာ ဒီလူတွေ ဟု တံဆိပ်ကပ် လျက် ပစ်မှတ်ပေး ချေမှုန်းစေခြင်း နည်းလမ်း ပါရှိသည် ကို တွေ့နိုင်သည်။
အစ္စရေးနိုင်ငံကို ဦးဆောင်တည်ထောင်သူ ဒေးဗစ် ဘင်ဂူရီယန် မှာ နဂိုက လက်ဝဲ၀ါဒီ တစ်ယောက်ပင်ဖြစ်သော်လည်း အစ္စရေးနိုင်ငံကို ထူထောင်မည်ဆိုသော ရည်မှန်းချက်ဖြင့် သွားရာလမ်းတွင် အမျိုးမျိုးသော မိမိတို့ အဖွဲ့ကွဲများကို တပ်ပေါင်းစုသဘော စုစည်းပြီး ရည်မှန်းချက်ဆီ ရောက်အောင်သွားခဲ့သည်။ သူကိုယ်၌က လက်ဝဲယိမ်း ဇီယွန်ဝါဒီ ဖြစ်သော်ငြားလည်း တည်ထောင်ကြမည့် အစ္စရေးနိုင်ငံသစ်မှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပုံစံဖြစ်ရမည် ဟု အသေအချာ ဆုံးဖြတ်ပုံဖော်ခဲ့သောသူ ဖြစ်လေ သည်။ လက်တွဲဖော်များကိုပင် ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူဆိုပြီး ကိုယ့်လူမျိုးချင်း ချေမှုန်းခဲ့သော ခေါင်းဆောင်မျိုးမဟုတ်ချေ။ သူနှင့်တကွ ရည်မှန်းချက်ရှိရာသို့လည်း ရောက်အောင် အတူတူ သွားနိုင်ခဲ့ကြသည်။
(စကားမှာ စကား ဆိုပါတော့) မော် လား၊ ဒေးဗစ် လား ဆိုသည့် အမေး ရှိလာလျှင် ဒေးဗစ် ဟုသာ ဖြေမည် သာ ဖြစ်လေသည်။
(1) Destroy the Old !
(2) Cultrul Revolution (Wikipedia)
(3) အခြားသော အင်တာနက် ဆောင်းပါးများ
(၂၀၁၆ မလေ ၁၈ ရကျ)
(ယဉျကြေးမှုတျောလှနျရေး အနှဈငါးဆယျပွညျ့ အထိမျးအမှတျ စာစု)
မျောစီတုနျး ဦးဆောငျသညျ့ ယဉျကြေးမှုတျောလှနျရေး ဟု ချေါတှငျသော ဧရာမ နိုငျငံရေး ဖွုတျထုတျသတျ ဖွဈစဉျကွီး မှာ ပွီးခဲ့သော ၂၀၁၆-ခုနှဈ မလေ (၁၆) ရကျနကေ့ အနှဈငါးဆယျ ပွညျ့မွောကျခဲ့ပွီး လပွေီ။ မဟာ ပစ်စညျးမဲ့ ယဉျကြေးမှုတျောလှနျရေး (Great Proletarian Cultural Revolution) ဟု တရုတျကှနျမွူနဈပါတီ တရားဝငျချေါဝျေါသော ဗရုတျသုတျခကာလကွီးပငျ ဖွဈလသေညျ။
ဖွဈစဉျ၏ စလုံးရစေ ၁၉၆၆-ခုနှဈ မလေ (၁၆) ရကျနတှေ့ငျ အောကျပါစာသားမြားပါဝငျသော အသိပေးထုတျပွနျခကျြ တဈစောငျကို ထုတျပွနျခွငျးဖွငျ့ ယဉျကြေးမှုတျောလှနျရေးကို စတငျခဲ့သညျ။
“ပါတီထဲ၊ အစိုးရအဖှဲ့ထဲ၊ တပျမတျောထဲ နှငျ့ ယဉျကြေးမှုနယျပယျအသီးသီးသို့ တိတျတဆိတျ စိမျ့ဝငျထိုးဖောကျလာခဲ့ကွသော ထို ဘူဇှာလူတနျးစား ကိုယျစားလှယျမြားမှာ တနျပွနျ တျောလှနျရေးသမား ပွနျလညျပွငျဆငျရေးသမား တဈသိုကျဖွဈကွသညျ။ ၄ငျးတို့အတှကျ အခွအေနအေရပျရပျတို့ ရငျ့မှညျ့ အဆငျသငျ့ဖွဈသညျနှငျ့ တပွိုငျနကျ ထိုသူတို့သညျ နိုငျငံရေးအာဏာကို ရယူသိမျးပိုကျပွီးနောကျ ပစ်စညျးမဲ့အာဏာရှငျစနဈကို ဘူဇှာတို့၏အာဏာရှငျစနဈ အဖွဈသို့ ပွောငျးလဲပဈလိုကျကွမညျ ဖွဈသညျ။ ထိုသူမြားထဲမှ အခြို့ကို သိသာမွငျသာနိုငျပွီ ဖွဈသျောလညျး အခြို့ကိုကား မသိသာမမွငျသာနိုငျသေးပေ။ ယငျးထဲမှ အခြို့မှာ ကြှနျုပျတို့ အခုထကျတိုငျ ယုံကွညျမိနကွေသေးသူမြား ဖွဈကွပွီး၊ ကြှနျုပျတို့ကို ဆကျခံဖို့အတှကျတောငျ လကေ့ငျြ့သငျကွား နရောပေးထားသူတှေ ဖွဈနကွေသညျ။ ပမာဆိုရလြှငျ ခရူးရှကျ ၏ သဘောသဘာဝရှိသောသူမြား ဖွဈသညျ။ ထိုသူမြားသညျ (ဆိုလိုသညျမှာ ထိုရနျသူမြားသညျ) ကြှနျုပျတို့၏ နံဘေးတှငျပငျ သကျတောငျ့သကျသာ လဲလြောငျးနကွေ တုနျးပငျဖွဈလသေညျ။ အဆငျ့ဆငျ့သော ပါတီကျောမီတီ အားလုံးတို့သညျ ဤအရေးကိစ်စအား မပွတျ သတိထား စောငျ့ကွညျ့ကွရမညျ ဖွဈသညျ။”
ဆိုလိုရငျးသတငျးစကား ကား ရှငျးပဈရမယျ့ လူတှေ ငါတို့ထဲမှာ ရှိနတေယျ ဟူ၏။
ထို့နောကျ မလေ (၂၅) ရကျနတှေ့ငျ ပီကငျးရှိ တက်ကသိုလျတဈခုမှ ပါမောက်ခတဈဦး နှငျ့ ၄ငျး၏ အပေါငျးအသငျးမြား သညျ ယငျးတက်ကသိုလျပါတီခေါငျးဆောငျမြားကို ဝဖေနျထားသော စကားလုံးတိုကျပှဲ ပိုစတာ တဈခုအား ကြောငျးဝငျးရှိ အဆောကျအအုံတဈခု နံရံတှငျ ကပျသညျ။ ရကျမြားမကွာမီ ပီကငျးရှိ အခွားသော တက်ကသိုလျတဈခုရှိ တက်ကသိုလျကြောငျးသား တဈစုကလညျး မိမိတို့ကိုယျမိမိတို့ တပျနီလူငယျမြား ဟု အမညျတပျကာ အလားတူ စကားလုံးတိုကျပှဲ ပိုစတာမြား ကပျကွသညျ။
နောကျလပိုငျးအကွာ သွဂုတျလ (၆) ရကျနတှေ့ငျ မျောစီတုနျးသညျ အဆိုပါ လှုပျရှားမှုမြားကို အားပေးသော မိနျ့ခှနျးတဈခုအား ပွောကွားသညျ။ တဖနျ နောကျရကျမြားမကွာမီပငျ မျောစီတုနျး ပထမဆုံး စီကုံးရေးသားသညျ ဆိုသော တိုကျပှဲပိုစတာ ထှကျရှိလာလသေညျ။ ယခုဆောငျးပါး၏ ပူးတှဲပါ ဓါတျပုံဖိုငျ တဈခုတှငျ စာရေးစုတျတံကိုငျထားသော မျောစီတုနျးပုံပါရှိသညျ။ ယငျးပိုစတာပငျ ဖွဈလသေညျ။ အဆိုပါ ပိုစတာ၏ ညာဘကျ အပျေါပိုငျး တှငျ စာသုံးကွောငျးပါရှိသညျ။ ပထမစာကွောငျးက ဆိုသညျမှာ “ဌာနခြုပျကို အမွောကျနှငျ့ ပဈကွ” ဟူ၏။ ဒုတိယစာကွောငျးက “ကြှနျုပျ၏ ပထမဆုံး စာလုံးကွီး ပိုစတာ” ၊ တတိယစာကွောငျးက “မျောစီတုနျး” အသီးသီးဖွဈကွသညျ။ မျော၏ နာမညျကွီး ဖွုတျထုတျသတျ တိုကျပှဲချေါသံ ပိုစတာဖွဈလသေညျ။ “ဌာနခြုပျကို အမွောကျနှငျ့ ပဈကွ” (Bombard the heardquarters) ။ ၇၂-နှဈ အရှယျ မျော ၏ တိုကျပှဲ အျောသံ ဖွဈလသေညျ။
ထို့နောကျ သွဂုတျလ (၈) ရကျနတှေ့ငျ လာမညျ့ ယဉျကြေးမှုတျောလှနျရေးအတှငျး ကငျြ့သုံးရမညျ့ မျောစီတုနျး၏ လမျးညှနျခကျြ (၁၆) ခကျြ ထှကျရှိ ထုတျပွနျသညျ။ ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး ရေးသားထားသညျပငျမှနျသျောလညျး စကားလုံးမြား၏ အထဲတှငျ အကွမျးဖကျမှု မြိုးစမြေ့ား ပါဝငျနသေညျ။ ဥပမာ – အခကျြ နံပါတျ (လေး)။
အခကျြနံပါတျ (လေး) ။ ။ လူထုကို ယုံကွညျပါ အားကိုးပါ၊ လူထု၏ ဦးဆောငျဦးရှကျပွုမှုကို လေးစားပါ။ ကွောကျရှံ့မှုကို လှငျ့ပဈပါ။ ဥက်ကဌကွီးမျောက ကြှနျုပျတို့အား ပွောသညျမှာ – တျောလှနျရေးမညျသညျ အလှနျ သိမျမှနေ့ေ၍မရ၊ နူးညံ့နေ၍မရ၊ ကွငျနာသနား ယဉျကြေးကာ ခငျြ့ခငျြ့ခြိနျခြိနျ ထိနျးထိနျး သိမျးသိမျး လူသူတျောကောငျး ပုံစံ လုပျနေ၍ မရ။
တပျနီအစောငျ့တပျဖှဲ့လှုပျရှားမှု အား လုပျဆောငျကွရတော့မညျ ဟု သွဂုတျလ (၁၈) ရကျနေ့ ထိယငျနငျမငျ ရငျပွငျ၌ ပွုလုပျသော ဧရာမ လူထုစုရုံးဟောပွောပှဲတှငျ မျောစီတုနျးက တိုကျတှနျးဟောပွောသညျ။ ထိုနကေ့ ဟောပွောနစေဉျ မျော၏ လကျမောငျးတှငျ စညျးနှောငျထားသော လကျပတျနီမှာ ဤကြောငျးသားလူငယျမြား လှုပျရှားမှု၏ အမှတျတံဆိပျ ဖွဈလာခဲ့သညျ။ “အဟောငျးလေးမြိုးကို ဖွိုဖကျြပွီး အသဈလေးမြိုးကို ပြိုးထောငျကွ” ဖို့ တပျနီလူငယျမြားအား ထိုဟောပွောပှဲတှငျ တိုကျတှနျးပွောကွားခဲ့သညျ။
ထို့နောကျတှငျ ဆငျ့ကဲဆငျ့ကဲ ဖွဈပကျြခဲ့သော သမိုငျးဝငျဖွဈစဉျမြားတှငျကား “ဥက်ကဌကွီးမျော၏ အဆိုအမိနျ့မြား” အမညျရှိ စာအုပျနီကလေးမြားကို လကျတှငျကိုငျဆောငျထားကွသညျ့ တပျနီလူငယျမြား တရုတျနိုငျငံအနှံ့အပွားတှငျး သောငျးကနျြးမငျးမူကွလသေညျ။ နောကျနှဈနှဈဆကျတိုကျ ကာလ လုံးလုံး ရကျစကျမှု အပေါငျး သရဖူဆောငျးသညျ။ အကွမျးဖကျမှုတို့ လှမျးခွုံသညျ။ တရုတျတဈပွညျလုံး ဝရုနျးသုနျးကား ဖွဈပကျြနခေဲ့လသေညျ။ မညျသူမြှ ထိနျးခြုပျ၍ မရ။ ထို မညျသူမြှထိနျးခြုပျ၍ မရသော ဝရုနျးသုနျးကား ဖွဈစဉျကွီးကိုပငျလြှငျ မျောက ဇကျကွိုးကိုငျထားခဲ့သညျ။ နှငျတံတို့ထားခဲ့သညျ။
Red Guards ချေါ တပျနီလူငယျမြားသညျ စာအုပျမြားကို မီးတိုကျသညျ။ ဘုရားကြောငျးကနျမြားကို ဖွိုဖကျြသညျ။ ကြောငျးဆရာမြားကို နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ ဆုံးမသညျ။ မျောစီတုနျးအား နိုငျငံရေးအရ အားပွိုငျနိုငျသူမြားကို ရှငျးလငျးသညျ။ လူအမြား သကွေပေကျြစီးကွရသညျ။ နံပါတျနှဈအဆငျ့ ခေါငျးဆောငျ တရုတျသမ်မတ လြူရှောကျရှီ မှာ ဖမျးဆီးနှိပျစကျခွငျးကို ခံရသညျ။ ရနျသူ၏ သူလြှို ဖွဈသညျ အစရှိသော စှပျစှဲခကျြပေါငျးမြားစှာဖွငျ့ ရာထူးတာဝနျမြားအားလုံးမှ ဖယျရှားပဈခွငျးခံရသညျ။ ပါတီမှထုတျပဈခွငျးခံရသညျ။ လြူလြောကျရှီမှာ အခါအားလြျောစှာ အမြားမွငျကှငျး လူစုလူဝေးရှတှေ့ငျ စှဲခကျြတငျ အပွဈတငျခွငျး လူပုံအလယျတှငျ ရိုကျပုတျခွငျး ထုထောငျးခွငျး တို့ကို တပျနီလူငယျမြားပွုသမြှခံခဲ့ရသညျ။ ၁၉၆၉-ခုနှဈတှငျ ထို ဒဏျရာ ဒဏျခကျြ မြားဖွငျ့ ကှယျလှနျသညျ။ နံပါတျ သုံး-လေး ခေါငျးဆောငျ အဆငျ့ရှိခဲ့သူ တိနျရှောငျ့ဖိနျ သညျ လညျး ရာထူးတာဝနျမြားအားလုံးမှ ဖယျရှားခွငျးခံရသညျ။ စကျရုံတဈရုံတှငျ အောကျခွအေဆငျ့ သာမနျအလုပျသမား တဈဦးအဖွဈ လေးနှဈ အလုပျလုပျခဲ့ရသညျ။
ထိုစဉျက ဖွဈရပျ ဓါတျပုံမြားစှာတို့တှငျ တပျနီလူငယျမြားမှာ စာအုပျနီကလေးမြားကို ကိုငျဆောငျထား ကွသညျ ကို တှရေ့သညျ။ ရကျစကျသောလုပျရပျမြားကို လုပျရာတှငျ ဥက်ကဌကွီးမျော၏ အဆိုအမိနျ့မြားကို ထိုစာအုပျငယျထဲမှ မကွာခဏ ကိုးကားကွသညျ။ “သငျတို့ကိုယျတိုငျနဲ့ လူတနျးစားရနျသူ အကွားမှာ ပွတျပွတျသားသား ခွားနပေါစေ (Drawaline between yourselves and the class enemy)” တို့၊ “ရနျသူကို သနားတာဟာ ပွညျသူလူထုကို ရကျစကျတာနဲ့ အတူတူပဲ (Mercy to the enemy is cruelty to the people!)” ဆိုသညျ့ မျော၏ စကားတို့မှာ ၄ငျးတို့၏ လကျစှဲမြား ဖွဈကွလသေညျ။ တရုတျပွညျအနှံ့တှငျ လူကွီးမြား၊ ပညာရှငျမြား၊ ပါတီခေါငျးဆောငျမြား၊ ဘာမှနျးညာမှနျးမသိ စှပျစှဲခံရသူ ယောကငြ်ျား မိနျးမမြားစှာတို့သညျ မိမိတို့သားအရှယျ မွေးအရှယျ လူငယျမြားထံ သှေးသံရဲရဲဖွငျ့ ဒူးထောကျတောငျးပနျကွရသညျ။ လညျပငျးတှငျ သစ်စာဖောကျ ဆိုသညျ့ စာတမျးကို ခြိတျဆှဲပွီး လူမွငျကှငျးတှငျ ထုထောငျးသတျပုတျခွငျး ခံကွရသညျ။ ခတျေပညာတတျ မွို့နလေူတနျးစားတို့အား လယျတောယာတောမြားတှငျ အလုပျကွမျးလုပျရနျ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ ပို့သညျ။
မျောစီတုနျး၏ မဟာခုနျပြံကြျောလှားမှုကွီး (the Great Leap Forward) ဟု အမညျပေးထားသညျ့ စီမံကိနျးကွီး ကရြှုံးသှားပွီးနောကျပိုငျး ငတျမှတျခေါငျးပါးမှုဖွဈပှားကာ တရုတျပွညျသူသနျးပေါငျးမြားစှာ သကွေခေဲ့ရ သညျ။ ထိုကရြှုံးမှုမှာ မျောဝါဒီတို့ ယုံကွညျသော ကှနျမွူနဈတျောလှနျရေးကွီး ကိုယျတိုငျ၌က မှားနလေို့ ဖွဈရတာမဟုတျ၊ ဒီတျောလှနျရေးကွီးကို သစ်စာဖောကျသောသူမြား ရှိနလေို့သာ တျောလှနျရေးကွီး ကရြှုံးနရေခွငျးဖွဈသညျ ဟု ယဉျကြေးမှုတျောလှနျရေးအားဖွငျ့ ပုံဖျောပဈလိုကျသညျ။ အငျအား ကွီးမားလှစှာသော ပွညျသူလူထု၏ မကနြေပျမှု ကို ထှကျပေါကျ ပေးလိုကျသညျ။ တဈပွိုငျတညျးမှာ နိုငျငံရေးပွိုငျဖကျမြား (တဈကယျတော့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ ဟောငျးမြား) ကို ရှငျးလငျးပဈ လိုကျသညျ။
မျော သညျ အတုမရှိ ခေါငျးဆောငျ ပွနျဖွဈသှားသညျ။
မွနျမာ့နိုငျငံရေးတှငျ တဈခါက မျောဝါဒီတှေ ပေါပေါမြားမြားတှရေ့သော ခတျေတဈခတျေ ရှိခဲ့ဖူးသညျ။
ယဉျကြေးမှုတျောလှနျရေးမှာ ရာစုနှဈဝကျ ကွာမွငျ့ခဲ့ပွီး၊ မျောစီတုနျး ကှယျလှနျသညျမှာ နှဈပေါငျးလေးဆယျရှိခဲ့ပွီ ဖွဈသျောလညျး မွနျမာ့လူ့အဖှဲ့အစညျး ရခိုငျ့လူ့အဖှဲ့အစညျးတို့တှငျ မျောဝါဒအား လြှို့ဝှကျသိုသိပျစှာ ရငျဝယျပိုကျထားကွသူမြား ယနထေ့ကျတိုငျ ရှိနဆေဲ ဟုတျမဟုတျ တိတိပပ မပွောနိုငျပေ။ သို့ရာတှငျ သဘောတရားရေးအရ မျောဝါဒီ လုံးဝမဟုတျပါ ဟု ခံငွငျးစဦေးတော့ နိုငျငံရေးအမူအကငျြ့ နိုငျငံရေးဆောငျရှကျရာမှာ လုပျတတျကိုငျတတျပုံ (modus operandi) မှာ မျောဝါဒီ အရိပျအငှမြေ့ား ရှိကောငျး ရှိနနေိုငျသညျ။
လူထုယုံကွညျမှု မှနျကနျစှာရယူနိုငျရေးထကျ ပါတီထိနျးခြုပျနိုငျရေးကိုသာ အားပွုခွငျး၊ ‘ရနျမုနျးမှ ငါခဈြရာရောကျသညျ၊ ရနျငါပွတျရမညျ’ စသညျအားဖွငျ့ လူငယျမြားအားမှိုငျးတိုကျခွငျး၊ မှိုငျးမိနသေော လူငယျမြားကတဈဆငျ့ မိမိ၏ နိုငျငံရေးပွိုငျဖကျမြားအား ပုတျခတျခွငျး တိုကျခိုကျခွငျး ခမြှေုနျးခွငျး၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျမြား ပွိုငျဘကျမြားကို ‘ရနျသူ’ အဖွဈ ‘ရနျသူ့သူလြှို’ အဖွဈ ‘သစ်စာဖောကျ’ အဖွဈ ပုံဖျောခွငျး တို့မှာ ယဉျကြေးမှုတျောလှနျရေးကာလ မျောစီတုနျး၏ နညျးလမျးအခြို့ ဖွဈလသေညျ။ ဌာနခြုပျကို ပဈပါ ဟု အမိနျ့ပေးခံရသော အမွောကျဆံ တို့သညျ အဘယျက လာသနညျး ? ။ ထိုအမွောကျဆံတို့သညျ မလုံခွုံမှုခံစားရသော မနာလိုစိတျမြားစီးယိုနသေော မျောဝါဒီ ခေါငျးဆောငျမြား ၏ ရငျထဲက လာခွငျးပငျ ဖွဈလသေညျ။
အမရေိကနျ လကျယာဝါဒီ Tea Party လှုပျရှားမှုက သုံးစှဲသော အထိမျးအမှတျအလံတှငျ ခလောကျမွှတေဈကောငျက ပေါကျတော့မညျ့ ဟနျပွငျနသေညျ့ ပုံပါရှိသညျ။ ထိုမွှပေုံ၏ အောကျတှငျ Don’t tread on me! ဟု စာရေးထားသညျ။ ငါ့ကို မနငျးနဲ့၊ နငျးရဲရငျ နငျးကွညျ့ ဆိုသညျ့သဘော။ လာနငျးရငျတော့ ပွနျကိုကျမညျ၊ မနငျးရငျ မကိုကျဆိုသညျ့ သဘော။ မိမိက စလို့ကြူးကာ တိုကျခိုကျသူ မဟုတျ ဆိုသညျ့ သဘော ပါနသေညျ။ နိုငျငံရေးပွိုငျဖကျမြားကို လကျဦးမှုရယူ အပွတျရှငျးတတျသညျ့ မျော ၏ လုပျနညျးလုပျဟနျ နှငျ့ ကြှနျတျော နှိုငျးယှဉျတှေးတောမိခွငျး ဖွဈသညျ။
သို့သျော အခွားတဈဘကျက မျောဝါဒီ အတှေးအချေါ ကတြော့ ရနျသူကို မုနျးမှ ပွညျသူကို ခဈြရာရောကျသညျ ဟု ဆိုပွီးသညျ့နောကျ၊ မိမိတဈဘကျတညျးသားတှကေိုပငျလြှငျ ရနျသူဆိုတာ ဒီလူတှေ ဟု တံဆိပျကပျ လကျြ ပဈမှတျပေး ခမြှေုနျးစခွေငျး နညျးလမျး ပါရှိသညျ ကို တှနေို့ငျသညျ။
အစ်စရေးနိုငျငံကို ဦးဆောငျတညျထောငျသူ ဒေးဗဈ ဘငျဂူရီယနျ မှာ နဂိုက လကျဝဲဝါဒီ တဈယောကျပငျဖွဈသျောလညျး အစ်စရေးနိုငျငံကို ထူထောငျမညျဆိုသော ရညျမှနျးခကျြဖွငျ့ သှားရာလမျးတှငျ အမြိုးမြိုးသော မိမိတို့ အဖှဲ့ကှဲမြားကို တပျပေါငျးစုသဘော စုစညျးပွီး ရညျမှနျးခကျြဆီ ရောကျအောငျသှားခဲ့သညျ။ သူကိုယျ၌က လကျဝဲယိမျး ဇီယှနျဝါဒီ ဖွဈသျောငွားလညျး တညျထောငျကွမညျ့ အစ်စရေးနိုငျငံသဈမှာ ဒီမိုကရစေီနိုငျငံပုံစံဖွဈရမညျ ဟု အသအေခြာ ဆုံးဖွတျပုံဖျောခဲ့သောသူ ဖွဈလေ သညျ။ လကျတှဲဖျောမြားကိုပငျ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရနျသူဆိုပွီး ကိုယျ့လူမြိုးခငျြး ခမြှေုနျးခဲ့သော ခေါငျးဆောငျမြိုးမဟုတျခြေ။ သူနှငျ့တကှ ရညျမှနျးခကျြရှိရာသို့လညျး ရောကျအောငျ အတူတူ သှားနိုငျခဲ့ကွသညျ။
(စကားမှာ စကား ဆိုပါတော့) မျော လား၊ ဒေးဗဈ လား ဆိုသညျ့ အမေး ရှိလာလြှငျ ဒေးဗဈ ဟုသာ ဖွမေညျ သာ ဖွဈလသေညျ။
(3) အခွားသော အငျတာနကျ ဆောငျးပါးမြား
Previous စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြားအား မိုးမကမြီကပငျ အကူအညီပေးနိုငျရနျ ရခိုငျအစိုးရက အမွနျဆုံး အကူအညီပေးသငျ့ကွောငျး အရေးကွီးအဆိုအား ရခိုငျပွညျနယျလှတျတျောတှငျ ဦးကြျောဇောဦး၏ ထောကျခံ/အကွံပွု ဆှေးနှေးခကျြ
Next ရခိုငျက အိမျရှငျနဲ့သူခိုး တို့ရဲ့ တနျးတူရေးပွဿနာ